Cubot MAX3 vaovao: 6,95 santimetatra ary fakan-tsary 48 MP ho an'ny $ 99,99 | Androidsis
Tao amin'ny Androidsis dia efa niresaka matetika momba ny mpanamboatra finday avo lenta Azia Cubot izahay, mpanamboatra iray miavaka amin'ny tolotra Smartphone tsara fampisehoana amin'ny vidiny mirary mihoatra ny antonony.
Ity mpanamboatra ity dia nanavao ny isan'ireo finday avo lenta ho an'ny 2021 miaraka amin'ny Ny Cubot MAX3, smartphone iray izay miavaka amin'ny efijery sy ny fakan-tsariny fakan-tsary Ary izany, raha manararaotra ny fandefasana azy amin'ny 23 aogositra isika dia afaka mahazo azy amin'ny $ 99,99, izay $ 100 amin'ny vidiny ofisialy $ 199,99.
Ny Cubot MAX3 dia manome antsika efijery goavambe 6,95 santimetatra amin'ny endrika 20.5: 9 sy ny vahaolana HD + (1.640 × 720), mahatonga azy io ho tsara amin'ny fihinanana atiny multimedia, indrindra ny sarimihetsika ary mankafy ny lalao ankafizinay. Ny sisin'ny efijery dia tery tery tery kely manome fahatsapana lalina.
Seho iray hafa miavaka amin'ity terminal ity ny fizarana sary. Ny Cubot MAX3 dia manolotra a fakan-tsary fakan-tsary misy lantiro 3, Maha- 48 MP sensor lehibe. Miaraka amin'ny sensor voalohany, mahita ihany koa isika solosaina makro 5 MP sy sensor lalina 0,3 MP.
Ny fakantsary natao ho an'ny selfie, hita eo amin'ny ilany havia ambony amin'ny efijery, mahatratra 1MP 6 ary mampiasa ny faharanitan-tsaina manala ny lesoka kely amin'ny tarehy. Ho fanampin'izany, ao koa ny rafitra famantaran-tarehy izay mamela antsika hamaha ilay fitaovana.
Manolotra anay ny Cubot MAX3 RAM 4 GB ary tahiry anatiny 64 GB fitehirizana izay ahafahantsika manitatra hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra TF. Ny processeur an'ny Cubot MAX3 dia 6762-core MT8, processeur izay mamindra ny tahiry Android 11 tsy misy olana, amin'izay dia afaka mankafy ny vaovao rehetra natolotr'i Google amin'ity kinova Android ity izahay.
Ny batterin'ity fitaovana ity, mahatratra ny 5.000 Mah, izay ahafahantsika mamoaka ny eritreritsika sy mahazo tombony be indrindra mandritra ny andro tsy misy olan'ny bateria. Ho fanampin'izay, noho ny fanamarinana IP69K, azontsika atao ny mampiasa azy amin'ny tontolo iainana nefa tsy atahorana hijanona tsy hiasa izy io.
Ity fitaovana ity dia mampiditra a NFC puce, puce azontsika ampiasaina Google Pay hanao fividianana isan'andro. Izy io dia mifanentana amin'ireo tamba-jotra 4G, mampiditra sensor amin'ny fantsom-panaovana rantsantanana hamaha ny fidirana amin'ilay fitaovana, Bluetooth 5.0
Ny vidin'ny fivarotana ofisialy an'ny Cubot MAX3 dia $ 199,99. Na izany aza, mba hankalazana ny fandefasana ny tsena dia azontsika atao ny mandray azy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny fahatongavany eny an-tsena sy vidio amin'ny $ 99,99 ihany hatramin'ny 23 Aogositra tamin'ny AliExpress.
Raha tianao izany fantaro ny antsipiriany rehetra momba ny Cubot MAX3, azonao atao ny mitsidika ny tranokalan'ny mpanamboatra amin'ny tsindrio ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Cubot MAX3 vaovao: 6,95 santimetatra ary fakan-tsary 48 MP ho an'ny $ 99,99